Mashandisiro Ekushandisa Mutemo weArbitration muUAE Kuchengetedza Kodzero Dzako | Amal Khamis Vamiriri nevanoona nezveMutemo
Mashandisiro Ekushandisa Mutemo weArbitration muUAE Kuchengetedza Kodzero Dzako?
Federal Arbitration Mutemo Mune Iyo UAE
arbitration magweta muAFA
Vanoti kuyananisa kwave kuchishandiswa kwemazana emakore, zvimwe zvezvinyorwa zvaPlato pamusoro penyaya zvichiripo nanhasi. MuMiddle East yanhasi, vezvakaitika kare vanoteedzerawo tsika yekumisidzana kusvika kumazuva ekutanga eIslam. Imwe timestamp inotambanudza yakatowedzera kumashure inonongedzera kukushandiswa kwekupokana naMambo Soromoni ane mbiri.
Tinoziva zvechokwadi kuti "Arbitration" yemazuva ano yakagadzwa seimwe nzira yekugadzirisa kusawirirana apo Paramende yeBritain yakagadza mutemo muna 1697. Uye kuti chinyorwa chekutanga cheizwi pachacho chaive naShakespeare, mu "Troilus" yake kumashure 1602. Kunyange izwi risati rashanduka, rinoita serinomiririra uye chinhu charinobata chiri kuchinja.
Chinzvimbo chekupokana senzira yekutanga yekugadzirisa kusawirirana, kushambadzira uye kupokana kwenyika hazvishamise - inomira senzira yakaedzwa kumatare. Arbitration inzira inozivikanwa yekugadzirisa gakava bhizinesi munzvimbo dzakadai dzekutengesa dzakadai seUAE. Izvo zvinosarudzwa nekuti zvinopa zvakati wandei pamusoro pechinyakare litigation nekuda kwekumhanya kwayo, kuvanzika, uye kuchinjika.
Kana chero chimwe chinhu zvakare chikave pachena, ndechekuti haisi chete makakatanwa ebhizinesi anokonzerwa nehurongwa hwekutengesa. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakajairika. Nehurombo, kumanikidza kodzero dzevanhu dzega kupokana nekushungurudzwa nemakambani kuburikidza nematare edzimhosva inzira yakashata. Neraki, izvo zvinotaridzika kunge zvichachinja, nekuda kwekuvandudzwa kutsva kwekugadzirisa.
Arbitration uye "Kodzero?"
Kazhinji, kuchengetedza kodzero dzako dzevanhu, unofanirwa kuenda kumatare. Sezvo isu tese tichiziva, iyi inononoka uye inopedza nguva maitiro. Nekutenda, iwe unogona kumanikidza kodzero dzako kuburikidza nekumisikidza pasina kuda kupinda mukati memadziro mana edare remutemo.
Kuti unzwisise kuti izvi zvinogoneka sei, zviri nani kutanga nekuuya kweBusiness neHuman Rights Arbitration muna 2013. Gore iro, iyo Dare Repamusorosoro reUnited States rakatonga kuti iyo US Alien Tort Statute ya1789 haina kushanda kunze kweUnited States. Sarudzo iyi yakaramba zvachose vanobatwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemakambani kuwana matare eUS kuti vagadzirise kumwe kutyorwa kwekodzero.
Nekuda kwechinzvimbo ichocho, zvakapinda mune yakakurisa kuti kumhan'arira inogona kuve imwe nzira yekugadzirisa gakava kumakambani nevaridzi vekodzero kugadzirisa gakava. Inotungamira uyu muganho mutsva ndiyo Hague Mitemo paBhizinesi neHuman Rights Arbitration (BHA) ("iyo Mitemo yeKodzero dzeVanhu Arbitration"), yakatangwa pamakumi mavirith yaDecember, 2020.
Mitemo iyi "inopa seti yemaitiro ekugadzirisa kukakavara zvine chekuita nekukanganisa kwezviitiko zvebhizinesi pakodzero dzevanhu." Izvi zvinobvumidza nyika, masangano emakambani, uye vanhu kugadzirisa gakava nemakambani nevemabhizimusi pamberi pekambani yedare repamutemo.
Iyo Arbitration Landscape muAFA.
Iyo UAE iri kutora mutero wepasi rese kana zvasvika pakurangana. Kwemakore mashanu apfuura, iyo UAE yatora nzvimbo yepakati sechigaro chekupokana chinosanganisira masangano emakambani nekutengeserana anowanikwa muEastern Europe, Africa neAsia.
Isu takaona kubuda kwepasi-kirasi masisitimu nemitemo yazvino inoenderana neyakanakisa maitiro epasirese. Kutenda kune yegoridhe-yakajairwa Arbitration Mutemo (Federal Mutemo Nha. 6/2018) uye chinzvimbo chemubato kuNew York uye nemamwe magungano ematunhu, iyo UAE iri kushandisa kwayo kugona kwayo kugadzirisa kupokana kwepasi rose mukutyora kodzero dzevanhu.
Kugadzwa kwemutemo weFederal Arbitration muna 2018 zvakanyatso kugadzirisa Arbitrations muUAE, zvakanyanyisa kusanganisira iyo UNCITRAL Model. Kutenda Mutemo, Arbitration muUAE inobvumidza zvikuru mukuti inopa mapato kukurira uye kushanduka pakuona arbitral mafambiro.
Pamusoro pezvo, inogadzawo simba revaArbitrator kupa matanho epamberi uye nekuita mirairo yekutanga. Izvi zvakakosha zvikuru kana uchiedza kugadzirisa nyaya inosanganisira kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Kuchengetedza Kodzero Dzako neAU Arbitration Mutemo
Mhedzisiro yezviitiko zvebhizinesi pane kodzero dzevanhu zvinoitika munzira dzakawanda uye zvakanyorwa zvakanaka. Semuenzaniso, zviitiko zvekambani nemakondirakiti ayo anogona kukanganisa mamiriro ezvakatipoteredza nekuisa nharaunda dzese mungozi.
Dzimwe nguva, izvi zvinokanganisa zvakare zvisina kunangana, zvichibuda kunze kwezviito zvevatengesi uye vebhizinesi vadyidzani mune yavo yekupa cheni. Pane ese, makambani kuburikidza neinotevera:
Kushatiswa kwezvakatipoteredza nenjodzi, uye kutadza kwehutano nekuchengetedza zvichikonzera kukuvara kwehutano hwevanhu,
Shanda munzvimbo dzisina kuchengetedzeka kana dzisina hutano,
Kumanikidzwa kana kushandiswa kwevana, uye kubhadhara pasi pevashandi;
Iko kusazvipira kana kumanikidzwa kutama kwenharaunda,
Kuendeswa kwesimba rakawandisa kune vashandi nevachengetedzi vanochengetedza zvinhu;
Kusarura kuvashandi, semuenzaniso, nedzinza, murume kana murume;
Kupera kana kusvibiswa kwematsime emvura anoenderana nharaunda dzemuno.
Iyi ingori mienzaniso, uye huwandu hwenyaya dzinogona kukwana kune zvine chekuita nebhizinesi nyaya dzekodzero dzevanhu dzinoramba dzakakura kwazvo.
Semutemo wenguva dzose, kushandisa arbitration kugadzirisa gakava rekontrakiti zvinongogoneka kana mapato acho achibvumidza aratidziro. Nekudaro, mumakakatanwa pakati pekambani nemupi wayo, chibvumirano chekuyananisa chinowanzo kuverengerwa muchibvumirano chekupa.
Iko iko nyaya isingakonzere nekutyora chibvumirano, mapato anongoendesa kukakavara kwavo kunananiso kuburikidza nechibvumirano chekutumira.
Nekudaro, kune nyaya dzine chekuita nebhizinesi-rekodzero dzevanhu, zvinotevera kuti nzira yekumisikidza mvumo ndeyekuisa chirevo chekuyananisa muchibvumirano chenyika dzakawanda chekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Izvi ndizvo zvinowanzo shandiswa nhasi. Mumwe muenzaniso weizvi Chibvumirano cheMoto uye Chengetedzo yeKuvaka muBangladesh.
Yakasainwa mushure mekuparadzwa kwechivakwa cheRana Plaza musi wa24 Kubvumbi 2013 (iyo yakauraya nekukuvadza zvakakomba zviuru zvevashandi), chibvumirano chakagadzirwa kuti chigadzire moto uye kuvaka chirongwa chekuchengetedza kwevashandi mumakambani emachira muBangladesh. Vanyorerana kuAccord vanosanganisira anopfuura mazana maviri emakambani epasirese, vatengesi, uye vatengesi munyika makumi maviri mumakondinendi mana.
Hazvisi pachena kana vanhu vanogona kutanga arbitration zvakananga. Semuenzaniso, mapato eBangladeshi Accord uye vamwe vangangoita iwo masangano evashandi nemakambani. Nekuda kweizvozvo, vashandi havagone kutanga arbitration pasi payo zvakananga. Ivo panzvimbo pezvo vanopa zvichemo chero zvipi nezvehutano nekuchengeteka kuburikidza nemaitiro akasimbiswa pasi pechibvumirano.
Sezvineiwo, kuyananisa kuviri kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakabuda pachena pasi pechibvumirano kusvika pari zvino. Nguva mbiri idzi, mapato akashandisirana kugadzirisa, uye matare ekutonga aripo akapa mvumo yekumisa.
Vanoziva Arbitration Magweta muAFA
Izvo zvitsva zvakaunzwa neUAE's 2018 Arbitration Mutemo zviri kupa kuwedzera kujekesa uye chokwadi cheBhizinesi uye kurwira kodzero dzevanhu. Iko kudzokorodza kuri kugadzira nzvimbo yeakanyanya kuchinjika munzira yekumisikidza inowanzoitwa.
Amal Khamis Advocates ane hunyanzvi hwekunyora zvibvumirano zvezvekutengeserana nekudyara, pamwe nekumiririra vatengi mukutongwa kwenyika dzese. Yedu ane ruzivo arbitration magweta izambuko rako rekuchengetedza kodzero dzako kana kuchengetedza mishonga yekutyora kupi. Kugona kwedu kugadzirisa gakava kunotibvumidza kushandisa zvakazara mutemo kana uchibatsira kuitisa arbitration.
Kana iwe uchida kugadzirisa gakava muAFA, mikana iwe unoshandisa nzira yekugadzirisa. Izvi, shure kwezvose, dombo rekona remutemo weUAE. Mukugadzirisa, wechitatu asina kwaakarerekera achakwikwidza uye kugadzirisa gakava iri. Isu tinogadzirisa yakaoma uye kuyambuka-muganho matambudziko epamutemo munzvimbo dzakawanda dzekudzidzira. Tsika yedu yakasarudzika inotigonesa kunzwisisa misika yemuno nekufamba munzvimbo dzakawanda. Isu tiri mamwe emafirinesi emutemo ekumisikidza muUAE. Bata nesu nhasi!